Waxaa dib loo aasaasay 1983. Iyada oo lagu xukumay in ay awood u leedahay in ay bixiso xalal farsamo oo fududeynaya shaqada maalinlaha ah ee jalaatada, had iyo jeer ku salaysan 5 mabaadi'da aasaasiga ah.
Ixtiraamka mabaadi'daani waxay ogolaatay kobaca weyn ee shirkaddan, taas oo hadda bixisa xalalka iyo qalabka labadaba qaybaha farsamada iyo warshadaha.
Taas oo ka dhigaysa Frisher maanta shirkad hormuud u ah qaybta, iyada oo joogitaanka dalka oo dhan iyada oo loo marayo shabakad ballaadhan oo qaybiyayaal ah, kuwaas oo keena qalabka Frisher iyo xalalka gees kasta oo dalka ah.
Dibadda, Fri waxaa lagu xoojiyay sida alaab-qeybiyaha ugu weyn ee mashiinnada iyo qalabka warshadaha jalaatada iyada oo ay uga mahadcelinayaan kaabayaasheeda Mexico, Brazil iyo qaybiyeyaasha adduunka oo dhan.
Bil ka dib, markii la dabagalay macaamilka, macmiilku wuxuu waydiiyay haddii aan bixin karno dhammaan alaabta Mitsubishi, waxaanu ku jawaabay haa.Kadib macmiilku wuxuu soo diray liiska alaabta Mitsubishi.
Logic Controller Plc Servo Motor Delta HMI 1kw Servo Motor Mitsubushi HMI Ac Servo Drive